» “रौतहटबाट आएको यो, खबरले माधब, नेपाल सहित सत्तागठबन्धन तनाबमा , एमाले खुसिले गदगद ! “रौतहटबाट आएको यो, खबरले माधब, नेपाल सहित सत्तागठबन्धन तनाबमा , एमाले खुसिले गदगद ! – हाम्रो खबर
“रौतहटबाट आएको यो, खबरले माधब, नेपाल सहित सत्तागठबन्धन तनाबमा , एमाले खुसिले गदगद !
हाम्रो खबर संबाद दाता 976 Views
“रौतहतबाट सत्तागठबन्धन दललाई नमिठो खबर आएको छ ।नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका रौतहट जिल्ला सचिवालय सदस्य बुधाई खाँसहित सयौं कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। सोमबार एमालेको फतुवा विजयपुर नगर अधिवेशनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरु एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।”
“खाँलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एमाले नेता प्रभु साहले माला र टीका लगाएर स्वागत गरेका थिए । असली क्रान्तिकारीको स्थान एमालेमै हुने भन्दै साहले बुधाई खाँसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेकालाई स्वागत गरेका थिए ।”
“सो अवसरमा बयोवृद्व कम्युनिस्ट नेता नेत्रबहादुर शिवभक्ति पनि एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । त्यस्तै उता बुलिङटार गाउँपालिका वडा नम्बर २ बाट नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी ४ सय ३५ जना एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । भोला लुङ्गेलीमगर, पारस थापा र गोपाचन्द्र ठाडाको नेतृत्वमा यूवाहरु एमाले प्रवेश गरेका हुन नेपाली कांग्रेसको एकछत्र रहेको गाउँका युवाहरु एमाले प्रवेश गरेका हुन् । ‘कांग्रेसको कुशासन’ सहन नसकेर एमालेमा प्रवेश गरेको भोला लुङ्गेलीमगरले बताए ।”
“एमालेमा प्रवेश गरेका युवा युवा गोपालचन्द्र ठाडाले भने, ‘विकास र सामाजिक न्यायका लागि एमाले रोजेका हौं ।’ कार्यक्रममा नेकपा ९एमाले० गण्डकी प्रचार विभागका सदस्य एवम् युवा नेता विद्रोही गिरीले बुलिङटारमा एमालेको लहर बढेको भन्दै एमालेमा सबैको उचित जिम्मेवारी हुने बताए ।”
“मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली र काँग्रेस महामन्त्री डां शशांक कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रबाट विकास र न्यायको आशा मरेकाले एमाले प्रवेश गरेको गिरीले बताए ।”
“देउराली, पेलेगा, रामकोट, भेलौरी, छरछरे, कोटा, बोझा, बरिमल भाङवारीलगायका ठाउँका काँग्रेस कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेका हुन् । सोही अवसरमा अर्खलाबाट ३२ जना , बुलिङटार –३ बाट १५ जना, कोटथरबाट २८ जना र भारतीपुरबाट एक जनासमेत प्रवेश भएका थिए ।”
“कार्यक्रममा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्यहरु कृष्ण घिमिरे, टंकनाथ गिरी, टंक माकिम, बुलिङटार गाउँ कमिटी अध्यक्ष मनवीर पुलामी, स्थानीय कोशराज पौड्याल, बलराम लामिछाने, सर्गबहादुर पुलामी र टंकप्रसाद आलेले मन्तव्य राखेका थिए ।”